21, 22. (a) Gịnị ka ndị a ga-akpọlite n’ọnwụ ha agaa eluigwe ga-abụ? (b) Ònye bụ onye mbụ a kpọlitere n’ọnwụ ya agaa eluigwe?
21 Baịbụl gwakwara anyị na a ga-akpọlite ụfọdụ ndị n’ọnwụ ha agaa eluigwe. A kpọlite mmadụ n’ọnwụ ya agaa eluigwe, ọ gakwaghị enwe ahụ́ mmadụ. Ọ ga-abụzi mmụọ.
E nwere ọtụtụ ihe mere ndị Chineke ji yie ndị chọrọ ịkwaga ná mba ọzọ.